Daawo: Soo Dhawaynta Bisha Barakaysan Ee Ramadaan [MIDHAHA DIINTA] – WARSOOR
Waxa afka innagu soo haysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan, iyadoo muslimiintu meel kasta oo ay joogaan is u diyaarinayaan gudashadeeda iyo soonka bisha barakaysan ee Ramadaan.
Muqaalkan uu oo idiinku talo galay barnaamijka MIDHAHA DIINTU, wuxuu si gaar ah u khuseeyaa soo dhawaynta bisha Ramadaan. Waxaana ka hadlaya sheekh Maxamed Cabdi Ummal. Ka faa’idaysi wanaagsan oo ku camalfal fiican. Ilaahay xaqa ha innagu sugo, sheekhana ajar iyo xasanaad ha ka siiyo.